December 23, 2019 – KTM VMAG
चाडपर्व – संस्कृति
पथरीकी रिजु भईन मिस पुर्वाञ्चल २०१९
धरान । शनिबार धरानस्थित धरान सभागृहमा सम्पन्न नेपालआइस मिस पूर्वाञ्चलको दसौं संस्करणको ताज आफ्ना १९ जना प्रतिस्प्रधीहरुलाई पछि पार्दै पथरी सनिशचरे- मोरङ्गकी रिजु भट्टराईले पहिरिएकी छिन् । टप १२ हुँदै टप ५ मा पुगेपछि मुख्य निर्णायक वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठको नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० सफल हामीले बनाउन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष के हो ? भन्ने प्रश्नको […]
अस्ताए ‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा’ का सर्जक
नेपथ्यको ‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा’ गीतका गीतकार सुक गुरुङको निधन भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथका बस्दै ५४ वर्षीय गुरुङ पछिल्लो समय मिर्गौला फेल भएर थलिएका थिए। एक साताअघि उपचारको निम्ति चरक अस्पताल भर्ना भएका गुरुङको आइतबार बिहान साढे ६ बजे निधन भएको हो । लम्जुङमा पुख्र्याैली घर भएका उनी पोखरामा बसेर नेपाली संगीतमा सक्रिय रहेका […]
‘जिउँदो’को ट्रेलर सार्वजनिक
दार्जि्लिङमा निर्माण भएको फिल्म ’जिउँदो’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । अलमिस्ट सुब्बाले निर्देशन गरेको फिल्मको प्रर्दशन मिति भने तोकिसकिएको छैन । निर्माण टिमका अनुसार माघ वा फागुनमा प्रर्दशन गर्ने तयारी रहेको छ । ट्रेलर हेर्नुस् :
कति छ अम्बानीकी छोरीको सम्पत्ति ?
भारतीय अर्बपति तथा रिलायन्स इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीकी २८ वर्षीया छोरी इशा अम्बानीको गत बर्ष डिसेम्बर १२ मा विवाह भयो । इशा परिमल ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक आनन्द परिमलकी श्रीमती बनिसकेकी छन् । सो भव्य विवाह समारोहमा विभिन्न क्षेत्रहरूको दिग्गज सेलिब्रिटी पुगेका थिए । विवाह मुम्बईको अम्बानीको घर ‘अन्टिटिया’ मा भएको थियो। इशा अम्बानी देशको सबैभन्दा […]
नङ चुस्ने करीनालाई आमाले दल्‍थिइन् खुर्सानीको धुलो
मानिसको आ-आफ्नै बानीहरु हुन्छन् । बलिउड अभिनेत्री करीना कपूरको एक बानी भने निकै अचम्मको छ । बाल्यकालमा करीनाले नङ चुस्ने भएको कारण उनको नङमा आमाले खुर्सानीको धुलो हाल्ने गर्थिन् । बानीको खुलासा गर्दै करीना भन्छिन्, ‘मलाई याद छ मेरी आमाले मेरो नङमा खुर्सानीको धुलो लगाइदिनुहुन्थ्यो ताकि म मेरो नङ नचुसु । तर यो त्यस्तो बानी […]
कुटपिटको दुई बर्षपछि सँगै देखिए कपिल र सुनील, सलमानले यसरी गराए मित्रता
भारतका चर्चित अभिनेता तथा कमेडियन कपिल शर्मा र सुनील ग्रोभरबीच लामो समयदेखि झगडा चल्दै आएको छ । दुबै एक अर्काको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्छन् तर आमने सामने भने आउनबाट जोगिन्छन्। हालै सलमान खानले केही गरे जसकारण दुबै एकै छानामुनि आए र सँगै फोटो पनि खिचाए । २० डिसेम्बरमा, सोहेल खानको जन्मदिन थियो। सो अवसरमा, खान […]
काउली खानुस क्यान्सरबाट बच्नुस ,खाने विधि सहित
नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै मिस्टर एण्ड मिस कल्चर वर्ल्डमा प्रवेश र निशा
बट्टारमा होटल रोयल इन सञ्चालनमा
प्रेम गीत ३ को अमेरिका राईट्स ४५ हजार डलरमा बिक्री
सौगात र दियाको हिमाली प्रेम कथा ‘मन्त्र’ टिजर रिलिज (भिडियो)
‘प्रेम गीत ३’ गीतको टिकटक बनाएर स्कुटर जित्ने अवसर
तमिल सुपरस्टार विजय इन्कम ट्याक्सको फन्दामा
डेब्यू सिनेमाको नयाँ गीत ‘झ्याम्मै आँखा झ्याम्मै’मा यस्तो छ निकिताको नाच
डि आर अटुको संगीतमा अमृताको ‘शिर फुल’ भिडियो
प्रथम मिस उदयपुरको ताज श्रद्धा भट्टराईलाई
गायक शिव परियार अमेरिकी सरकारको कला पुरस्कारबाट सम्मानित
थिएटर मलमा १३ कलाकारको ‘क्याभास एट थिएटर’ चित्र प्रदर्शनी
नेपाल कस्मेटिक व्यबसायी संघमा नयाँ कार्यसमिति चयन
Powered By : 3D NEPAL
New Baneshwor, Thapagaun, Kathmandu